Politics – Page 17 – Chin State Post
President Hlun Thein Sein nih “President” tuan khawhnak dingahaherhmi kongachimmi
Tangdor te le lungthin tak tein i zuam peng ahcun President tuan khawh asi tiah President Hlun Thein Sein nihachim. Thein Sein hi chuahpi unau pa3lakah hngakchia bik asi i Daw…
အေးအေးဆေးဆေး လယ်စိုက်နေပြီဆိုတဲ့ သမ္မတဟောင်း ဦးသိန်းစိန် ======================================== ၁၁ အောက်တိုဘာ ၊ ၂၀၁၇ ရခိုင်ပြည်နယ် အရေးကိုလည်း လက်ရှိ အစိုးရက ကြိုးစားဆောင်ရွက် နေတာ တွေ့ရလို့ အထွေအထူး ပြောစရာ မရှိသလို ၄င်းအ နေနဲ့လည်း နိုင်ငံရေးကိစ္စတွေထက် လယ်စိုက်တာကို အားထည့်နေရလို့ လယ်သမား ဘဝကို နှစ်သက်မိကြောင်း၊ လယ်မြေကို တ ကယ် စိုက်ပျိုးကြည့်မှ လယ်သမားဒုက္ခကို သိရမှာ ဖြစ်ကြောင်း…
President Hlun Thein Sein nih Rakhine buainak kong le rianatuan lio mi kongaphuan ve cang
President Hlun Thein Sein nih Rakhine buainak ruangah bawmhnak zongava pek ve hna. NLD Cozah nih Rakhine buainak ah an si khawh chung in an tuan ko caah ka lung tling ngai ko…
ဥရောပသမဂ္ဂက မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့် အဆက်ဖြတ်မည်
10 October 2017 ဥရောပသမဂ္ဂ(EU)က မြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများကို ဘင်္ဂလီဒုက္ခသည် ၅ သိန်းထက်မနည်းအား တိုင်းပြည်ပြင်ပ ထွက်ပြေးစေခဲ့သည့်အတွက် ပထမအဆင့်အနေဖြင့် အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်သွားမည်ဟု ရိုက်တာသတင်းတပုဒ်က ရေးသားထားသည်။ EU နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများက မြန်မာနိုင်ငံ အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်ပြီး အောက်တိုဘာလ ၁၆ ရက်တွင် ဆွေးနွေးကြမည်ဖြစ်ပြီး ထုတ်ပြန်မည့် ကြေညာချက်တွင် မြန်မာ့တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နှင့် အခြားစစ်အရာရှိကြီးများအား ဖိတ်ခေါ်ခြင်းအား ရွှေ့ဆိုင်းထားမည်ဆိုသည့်အချက် ပါဝင်ကြောင်း…
Ralkap le USDP lawng soisel halh uh; NLD hi soisel awk si: Hla Shwe
Democracy Uknakaduh taktak mi nih cun NLD hi kan soisel awk si tiah USDP nih an i bochan ngaimi Hla Shwe nihachim. NLD nih teinak an hmuh hnu in NLD Cozah…
NLD Cozah chungahachuak bal lo mi thilachuak
NLD Cozah kum2chungahachuak bal rih lo mi thil tuni October 10 ahahung chuak. NLD Cozah hi kum2chung hrawngasi cang i Ramkulh le ramthen chief minister…
ဘရူနိုင်းဒါရူဆလမ်ဘုရင်မင်းမြတ်၏ဖိတ်ကြားချက်အရ ဘရူနိုင်းဘုရင်မင်းမြတ်၏နန်းသက်ဆက်ခံပွဲသို့ ရောက်ရှိနေသော ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ဘရူနိုင်းနိုင်ငံ၏ အင်္ဂလိပ်စာဖြင့် ထုတ်ဝေသော ပြည်တွင်းမီဒီယာတစ်ခု ဖြစ်သည့် The Times of Royal Brunei သတင်းဂျာနယ် မှ ဘုရင်မ ဟုမှားယွင်းဖော်ပြခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။ The Queen of the Republic of the Union of Myanmar H.E Aung Sann Suu…
Aung San Suu Kyi cu Brunei Media nih ngeih thiam an hal cang
Brunei ramchung Media The Times of Royal Brunei(English Edition) nih Suu Kyi cu Siangpahrang nu tiaharak tial. Suu Kyi cu State Counsellor tiin tial dingasi nain The Queen of the republic…
Myanmar ramkhel (Politician) tuanmi lakah mirum bik pa (5)
Myanmar ramkhel tuanmi hna lakaharumbik minung pa (5) le an ngeihmi zat hna cu,,, 5. Than Shwe $23m 1992 in 2011 tiang bia tak tein ramkhelarak tuanmi asi. SPDC Party zong…
မန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကို ပိတ်ဆို့အရေးယူဖို့ အမေရိကန်နဲ့ အီးယူစဉ်းစား
အမေရိကန်နဲ့ အီးယူ ဥရောပသမဂ္ဂဟာ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုး ၅ သိန်းကျော်ကို နေရပ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးရအောင်လုပ်တဲ့ မြန်မာစစ်တပ်ထဲက ထိပ်တန်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကို ပိတ်ဆို့အရေးယူဖို့ စဉ်းစားနေတဲ့အကြောင်း အမေရိကန်၊ ဘရပ်ဆဲလ်နဲ့ ရန်ကုန်က သံတမန်တချို့က ရိုက်တာစ်သတင်းဌာနကို ပြောဆိုတယ်လို့ ဒီကနေ့ထုတ် သတင်းတပုဒ်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ပြဿနာတွေ ဖြစ်ပွားအောင်လုပ်ဆောင်တဲ့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကိုသာ ပိတ်ဆို့အရေးယူပြီး စစ်တပ်ကို ချုပ်ကိုင်တာမဟုတ်တဲ့ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတော့ အရေးမယူဖို့ အနောက်နိုင်ငံအစိုးရတွေကြားမှာ သဘောတူထားတယ်လို့ ရန်ကုန်မြို့မှာရှိနေတဲ့ ဥရောပသံတမန်တဦးက…